Sangano rinomiririra vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende, reZimbabwe Hospital Doctors Association, ZHDA, rinoti rava kuita hurukuro nehofisi yemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, sezvo pane vanhu vanga vachiendesa mashoko emanyepo kumutungamiri wenyika pamusoro pezvichemo zvavo.
Mutungamiri wesangano iri, Dr Elias Muzoremba, vaudzawo Studio7 kuti sangano ravo harinei nezvematongerwo enyika uye harisi kushanda nemamwe masangano sezvange zvichitaurwa nevamwe vanhu vanoda kukanganisa mashandiro avo.
Dr Muzoremba vanoti vana chiremba vakamirira kunzwa kubva kuna VaMnangagwa sezvo vakasvitsa zvichemo zvavo kwavari mushure mekuona kuti zvichemo zvavo zvange zvisingasvitswi kumutungamiri wenyika.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri waVaMnangagwa, VaGeorge Charamba, kuti tinzwe pamire VaMnangagwa panyaya iyi.
Asi VaCharamba vaudza pepanhau reThe Herald kuti VaMnangagwa vagurira zororo ravo panzira kuitira kuti vagadzirise zviri kunetsa munyaya dzehutano izvo zviri kukonzerwa nekuramwa mabasa kwavana chiremba ava.
Vatiwo VaMnangagwa vakatarisirwa kutora matanho akaomarara uye vachange vachishanda pamwe chete nemutevedzeri wavo, VaConstantino Chiwenga, avo vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika.
Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanga vachiita nhaurirano neHealth Services Board, pamwe negurukota rezvehutano, VaObediah Moyo, asi hapana chine pundutso chati chabuda.
Hurumende yanga ichiburitsa mashoko ekuti nhaurirano idzi dzanga dzichibudirira zvikuru, uye pane dzimwe nguva yakamboti vana chiremba vainge vadzokera kumabasa mushure mekunge vawirirana nehurumende.
Asi ichi chakanga chisiri chokwadi sezvo kuramwa mabasa kwavana chiremba kuri kuenderera mberi vana chiremba ava vachiti vanoda kuti zvichemo zvavo zvitange zvagadziriswa.
Vana chiremba vari kuda kuti vatambiriswe mari dzavo nemari yekuAmerica; muzvipatara muve nemishonga inokwanira varwere; uye kuti vana chiremba ava vapihwe mukana wekutenga motokari dzekufambisa kuenda kumabasa avo.
Pari zvino vana chiremba vari kutambira mazana matatu nemakumi maviri ane madhora mapfumbamwe pamwedzi, asi mari iyi vachiipihwa ari maRTGS.
Vana chiremba vava nemazuva makumi matatu nemaviri vachiramwa mabasa, uye vana chiremba vakuru vakakandawo mapadza neChitatu vachiti zvinhu zvava kuvaremera muzvipatara sezvo vagara vachishanda pamwe chete navana chiremba vadiki vari kuramwa mabasa.
Dare remakurukota rakadoma VaChiwenga kuti vatungamire mukugadzirisa zvichemo zvavana chiremba.
Asi nyanzvi munyaya dzehutano dziri kuziva zviri kuitika dzinoti pane kuti vayananise gakava riripo, VaChiwenga vari kushandisa pfungwa dzechiuto munhaurirano idzi, izvo zvisiri kutambirwa zvakanaka nevashanda mumapazi ane chekuita nezvehutano, sezvo kuramwa mabasa kwavana chiremba, kwava kuvhiringawo mashandiro avo.